Neoplatonisma - Wikipedia
Ny neoplatonisma dia firehana ara-pilozofia sy ara-panahy novolavolain'ny fiolozofa platonisiana tamin'ny faramparan'ny Andro Taloha, izay miavaka noho ny fanomezany lanja ny Foto-javatra Voalohany (grika: Ἀρχή / Arkhê), dia ny Iray (grika: τὸ Ἕν / to Hen), amin'ny sehatry ny metafizika, sy noho ny fahatsapana mistika. Nampandroso ny neoplatonisma i Plotinosy sy i Porfiriosy sy i Proklosy ary i Jamblikosy (na Iamblikosy) ka niteraka fandraiketana ny fisainan'i Platona izany. Nisy akony lehibe teo amin'ny filozofia jiosy sy ny filozofia kristiana ary ny filozofia silamo ny neoplatonisma ary nisy fiantraikany teo amin'ny filozofa toa an'i Hegel sy i Schelling koa ny neoplatonisma.
I Filona avy any Aleksandria (taona 20 tal. J.K. - 45 taor. J.K.) no mpialoha lalana io fihetsiketsehana io tamin'ny taona 40 taor. J.K., avy eo nandroso tao Roma izany nanomboka tamin'ny taona 232 vokatry ny asa soratr'i Amoniosy Sakasy (taona 175 - 242 taor. J.K.), mpampianatran'i Plotinosy (taona 205 - 270 taor. J.K.), ary ny mpianatr'ity farany ity, dia i Porfiriosy (taona 234 – 310 taor. J.K.) sy i Iamblikosy (taona 250 - 330 taor. J.K.). Ny neoplatonisma dia filozofia tena niantraika tamin'ny Andro Taloha, niaraka tamin'ireo mpanohy azy toa an'i Proklosy (taona 412 - 485 taor. J.K.) hatramin'ny nanaovana sessitany ireo mpanaraka azy toa an'i Damaskiosy (taona 460 - 537 taor. J.K.) sy i Simplikiosy avy any Kilikia (taona 480 - 549 taor. J.K.) tamin'ny taona 529, noho ny fanakatonan'i emperora Jostiniano ny sekoly sy ny toeram-panompoam-pivavahana sasany.
Araka ny neoplatonisma, ny fototr'izao rehetra izao dia ny Iray (grika: τὸ Ἕν / to Hen), tsiefa, tsy azo fantarina sy tongalafatra. Ny filozofia dia manao izay hahatongavana any amin'ny Iray amin'ny alalan'ny dialektika araka ny ahafantarana azy ao amin'ny Parmenidesy (grika: Παρμενίδης / Parmenides) nosoratan'i Platona. Miainga amin'ny fehezankevitra fototra hoe "Ny misy dia Iray" ny filozofa neoplatonisiana, avy eo mizarazara an'izany araka ny fisehony isan-karazany, ary mandinika ny fiantraikan'izy ireo tsirairay sy ny fiantraikan'ny fandavana azy ireo tsirairay.
Maro ireo dingam-pisiana mivoaka avy amin'ny Iray. Ny ambony indrindra dia ny νοῦς / noûs ("fanahy") na haranitan-tsaina tsy mifangaro. Avy aminy no nipoiran'ny fanahin'izao rehetra izao (grika: ψυχὴ κόσμου / psuchè kósmou), izay nanao asa famoronana niteraka ireo fanahy ao amin'ny dingana ambany, dia ny fanahin'ny olombelona. Ny fanahin'izao tontolo izao dia heverina ho sahala amin'ny sarin'ny noûs, amin'ny maha sarin'ny Iray ny noûs. Na dia mifanalavitra aza ny fanahy noûs (νοῦς) sy ny fanahin'izao tontolo izao (ψυχὴ κόσμου) dia samy ahitana fiziana (grika: οὐσία / ousia) tokana, ary miray fiziana amin'ny Iray.
Amin'ny maha mpanelanelana ny fanahin'izao tontolo izao eo anelanelan'ny noûs sy ny tontolon'ny raha, dia afaka misafidy ny fitehirizana ny maha izy azy manontolo sy ny fahatongalafatry ny sariny ny fanahin'izao tontolo izao, na misafidy ny fahasimbana vokatry ny filàm-pahafinaretana sy ny fahalovana. Izany safidy izany ihany no ananan'ny fanahy tsirairay ao amin'ny dingana ambany. Ny tsy fahalalan'ny fanahin'olombelona (ψυχὴ) ny tena fombany (toetrany) sy ny tena maha izy azy dia miteraka fahatsapana fisarahana sy fahaleovan-tena, izay mitarika azy amin'ny fianjonanjonana sy ny fahatokisan-tena be loatra. Araka ny hevitr'ireo filozofa neoplatonisiana dia azo atao mandrakariva ny mamonjy ny fanahy toy izany, indrindra noho io fahalalahan'ny sitrapo izay ahafahany misafidy ny lalan'ny raha io. Ny fanahin'izao tontolo izao dia tokony hampifamadika ny safidiny mba hiverina amin'ireo loharano nipoirany. Izany asa fanakambanana indray izany dia tanteraka amin'ny alalan'ny fahatsapana mistika sady atao hoe "fiovam-piainana".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoplatonisma&oldid=973751"
Voaova farany tamin'ny 1 Septambra 2019 amin'ny 13:44 ity pejy ity.